အဘယ်ကြောင့်သင်အလုပ်နေ့ပြီးနောက်အဖြူဝတ်ဆင်လို့မရပါဘူး? - နှုန်းထားများ
သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်၏ဘဝတစျခုလုံးကိုကြားရကြလိမ့်မယ်, သငျသညျအလုပ်သမားနေ့အပြီးအဖြူဝတ်ဆင်လို့မရပါဘူးနှင့်သင်ကနောက်ကွယ်မှသမိုင်းကိုကြည့်သည်အထိ, ဒီလမ်းကြောင်းသစ်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ အားလုံးသည် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းစတင်ခဲ့ပြီးမြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကြွယ်ဝမှုများနှင့်ရောနှောခဲ့ရသည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကအလုပ်သမားနေ့ပြီးတဲ့နောက်သင့်ရဲ့နွေရာသီအဝတ်အစားတွေကိုပြဖို့အရေးကြီးတယ် ၁) မင်းတတ်နိုင်တယ် နှစ်) ဆောင်းတွင်းနှင့်၎င်းနှင့်အတူပါလာသောရှုပ်ထွေးမှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်သင်၏မှောင်မိုက်သောအဝတ်အစားများကိုထုတ်ယူပါ။ အဖြူသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၏အရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆောင်းရာသီဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအလုပ်မလုပ်မီထုံးစံအတိုင်းဖြစ်လာပြီးအဖြူရောင်ဘောင်းဘီကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။
စတိဗ်တစ်ဦးအရက် bannon သလဲ?
အလုပ်သမားနေ့သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောနွေရာသီ၏နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်အဖြူရောင်နှင့်ဆောင်းရာသီတွင်အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ခြင်းသည်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၈၈၂ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Daily Evening Register သည်စာမျက်နှာ ၂ တွင်အဖြူရောင်အကြောင်းသတိပေးမှုနှင့်အတူ၎င်း၏စာတမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ LADIES FOR ဖတ်တယ်။ နွေရာသီမှာအဖြူရောင်ဝတ်ပါ။ လမ်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ၊ ကမ်းခြေမှာဖြစ်စေအရောင်ဒါမှမဟုတ်ရာသီအလိုက်ပဲ။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်အဖြူသည်နွေရာသီ၌အေးမြ။ အလင်းရောင်နှင့်အေးမြသောအရောင်ဖြစ်လာပြီးနေပူမှအပူများလွန်းခြင်းမရှိဘဲနွေးထွေးသောရာသီဥတုကိုအနားယူရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်ဖိနပ်သည်နွေရာသီတွင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးနွေရာသီတွင်သာဝတ်ဆင်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
သင်ရုံမေလအောက်မေ့ဖွယ်နေ့တိုင်အောင်တစ်နှစ်လုံးစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ဒါဟာအဖြူမရှိဘဲရှည်လျားပြီးမှောင်မိုက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြစ်သည်။ နွေးထွေးသည့်ရာသီဥတုတွင်နေထိုင်ပါကအဖြူရောင်စည်းမျဉ်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်သင့်အတွက်အကျိုးရှိသည်ကိုလုပ်ခြင်းသည်သင့်လျော်သည်ထက်ပိုသည်။
ဒီစည်းမျဉ်း 2016 ခုနှစ်တွင်အသက်ရှင်လျက်နှင့်ကောင်းစွာလား?
အနှစ် ၂၀၀ ကြာပြီးနောက်ဆောင်းတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြူရောင်အဝတ်အစားများကိုနှုတ်ဆက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့ချစ်သောအဖြူရောင်အဝတ်ကိုခဏလောက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများချမှတ်နိုင်သည်။
ဒီစည်းမျဉ်းကိုသပိတ်မှောက်ပြီးအဖြူရောင်ဝတ်ကြပါစို့၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဆိုကြပါစို့။ သင်မိသားစုအားလပ်ရက်ကဒ်တွင်အကောင်းဆုံးကိုသင်သွားမည်ကိုသင်သိသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မရဲ့ E ရဲ့ဖက်ရှင်ရဲများ၏မျက်စိ, ဒါပေမယ့်ငါ့စာအုပ်ထဲမှာ, သင်ချင်သောကြောင့်, ထိုအဖြူရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ဆင်အချို့သော 200 နှစ်အရွယ်အစဉ်အလာကိုမရန်သင့်အားတောင်းပန်နေသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းအဖြူကို ၀ တ်ဆင်ပြီးဂုဏ်ယူ ၀ တ်ဆင်ပါ။ ဝက်အူအစဉ်အလာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကုန်အံ့။